အောင်မြင်မှုအတွက်အဆင့် (၆) - Porn နှင့်ဆက်နွယ်သော ED နှင့်မျှတသောလိင်ဖော်ပြမှုသို့ပြန်လာခြင်း။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
အောင်မြင်မှုအတွက်အဆင့်ခြောက်ဆင့် - Porn နှင့်ဆက်စပ်သော ED နှင့်မျှတသောလိင်ဆိုင်ရာဖော်ပြမှုသို့ပြန်လာခြင်း။
[ပြင်ဆင်ရန်]: ဒီတစ်ကြောက်မက်ဘွယ် link ကိုဖြစ်ပါသည်: http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/1ab9ww/official_trigger_list/
ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့ဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဤအချက်ကိုအငြင်းပွားရန်မလမ်းရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့ဖန်တီးပေမယ့်လက်တွေ့ဘဝနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားအမြင်ပလပ်စတစ်နဲ့မမြဲဖြစ်ကြောင်းပေမသာကြောင်း၎င်း၏အလွယ်တကူသရုပ်ဖော်။ (ကျွန်ုပ်တို့၏အခွအေနေမမြဲကြောင်း) ဤအချက်ကိုလက်ခံခြင်းကိုယျ့ကိုယျကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြစ်မှန်၏ re-လိုက်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားအမြင်အများဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးသဖြင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များအတွက်မွေးမြူသောသိမှုဆိုင်ရာအာရုံပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။
သဘာဝတရားအထူးညစ်ညမ်းစေရန်အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏လုပ်ရပ်များဖျော်ဖြေ၏ရလဒ်အဖြစ်, သဘောသဘာဝ၏ဥပဒေများနှင့်အတူပြည့်စုံအညီကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပျြောမှေ့စအတွေ့အကြုံအချို့ကြင်နာဖို့အေးစက်လာပြီးဤအရပ်မှသာလေ့လာသင်ယူခဲ့ပြီးအချို့လမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုထူထောင် ကြောင်းအထူးသဖြင့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုတုံ့ပြန်ရန်။ ဒီသိမှတ်ကြလော့ကျနော်တို့ပုံမှန်မဟုတ်သောနှင့်သဘာဝအဖြစ်ကိုယျ့ကိုယျကိုမဆိုအမြင်ပပျောက်နိုင်။ တကယ်တော့ဒီအခြေအနေကိုသို့ကျွန်တော်တို့ကိုရတယ်ကြောင်းယင်း၏သဘောသဘာဝနှင့်ငါတို့ကိုနှုတ်ရလိမ့်မည်ဟုသဘောသဘာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ကျနော်တို့ကယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံများတွင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကြှနျုပျတို့သညျဤမလိုလားအပ်သောအခွအေနေအားတစ်လမ်းအတွက်ဆောင်ရွက်ရန်ဆက်လက်လျှင်, တစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
သဘာဝတရားအားပြုပြင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သဘာဝကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သဘာဝနိယာမများနှင့်လည်းကိုက်ညီသည်။ ၎င်းသည်အဆိပ်ဖြေဆေးများအတွက်အဆိပ်များကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်နှင့်တူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာတစ်ခုကိုအခြားတစ်ခုဖြင့်အစားထိုးခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာတစ်ခုကိုအခြားအရာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲနေပါသည်။ ကျနော်တို့တ ဦး တည်းအလေ့အထအခြားနှင့်အစားထိုးလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်ရိုးရိုး၎င်း၏ရောင်စဉ်၏အခြားအဆုံး။ အဲဒါကို“ rebooting” လို့ခေါ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်များသည်ပြန်လည်ဟန်ချက်ညီစေရန်ပြန်လာသည့်အခါ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့သည်အရင်ကကဲ့သို့ ထပ်မံ၍ အေးဆေးတည်ငြိမ်ရန်လမ်းဖွင့်လာလိမ့်မည်။ ထိုအခါကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိသည့်အတိုင်းတုံ့ပြန်လိုသည့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်နိုင်သည်၊ ဤကိစ္စတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေမျှမဟုတ်ဘဲတကယ့်ဘဝလက်တွဲဖော်နှင့်အတူဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ကြိုးစားနေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာကြီးကိုမြင်တွေ့ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုလားသည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်မှုများကိုပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသွင်ပြောင်းနေဆဲဖြစ်ပြီး၊ အဓိကခြားနားချက်မှာရည်ရွယ်ထားသည့်ရည်မှန်းချက်နှင့်ရလဒ်ဖြစ်သည်။
လူ့ဘောင်သည်လူသားများနှင့် ပတ်သက်၍ စံပြစံနှုန်းတစ်ခုကိုယုံကြည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအေးစက်စေခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောယုံကြည်မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကိုစွဲမှတ်စေသောအခြေအနေများသာဖြစ်ကြောင်းနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။ သူများသည်ဆွဲဆောင်မှုမမြဲဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ၄ င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုအပေါ်အခြေပြုပြီး၊ ဒီဟာကထူးဆန်းတယ်လို့မထင်ဘူးလား ကျွန်ုပ်တို့သည်ကလေးများကိုလိင်ဆက်ဆံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များဖြင့်သာထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းနှင့်လုံးဝသဘာဝကိုလုံးဝမလိုက်နိုင်သောမဖြစ်နိုင်သည့်အလောင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်ကြသည်။ ထိပ်ဆုံးသို့ရောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေရန်ပြောထားသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းဟောပြောချက်တစ်ခုသာပေးသော်လည်း၎င်း၏အန္တရာယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတမရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့သွားသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူသောကမ္ဘာကိုတွေ့ရှိရပြီး၎င်းသည်တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းဖြင့်အလွန်အစွန်းရောက်သည်။ ထို့နောက်၎င်းသည်လိင်နှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်များကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်သရုပ်ဆောင်များ၏လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေများကိုအမြဲတမ်းသက်သေခံခြင်း၊ တနည်းကား, လုံးဝ Unreal ။
လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဤကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးရှိစေကြောင်းသိရှိထားခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေအနေအပေါ်မိမိကိုယ်ကိုရိုက်နှက်ခြင်းကိုရပ်တန့်နိုင်သည်။ ငါတို့မသိဘူး၊ မသိဘူး လူတွေကဆေးလိပ်သောက်တာကမင်းအတွက်တစ်နည်းနည်းနဲ့ကောင်းတယ်လို့ထင်ကြတာ၊ ဒါကတကယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်လိုပါပဲ။ အဝိဇ္ဇာသည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသို့မဟုတ်အခြားနည်းဖြင့်အမြဲတမ်းထိုကဲ့သို့သောပြproblemsနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒါပေမဲ့အခုငါတို့သိပြီ၊ ငါတို့မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရှိတယ်။ ငါတို့သိသောစိတ်ကိုသတိရ။ ငါတို့ဆင်းရဲဒုက္ခ၏ရင်းမြစ်မှခွဲထုတ်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုမုန်းတီးမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ လူ့အမှားများကိုသာခွင့်လွှတ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအခြေအနေကိုပြောင်းလဲနိုင်ရုံသာမကကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေကိုပုံဖော်။ လုပ်နိုင်သောအင်အားများစွာရှိသည်။ တလျှောက်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိန်းချုပ်မှုမရှိကြောင်းကိုလက်ခံသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအားပြန်လည်ရရှိရန်အတွက်နေရာလွတ်ဖန်တီးသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့ကအမှန်တကယ်မှာငါတို့မရှိတဲ့အချိန်မှာငါတို့ဟာထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုစွဲကပ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကမှားယွင်းစွာပြုမူခြင်းသာဖြစ်တယ်။ ထို့နောက်သင်သည်မှားယွင်းသောယူဆချက်များနှင့်ကောက်ချက်များစွာအပေါ် အခြေခံ၍ ရွေးချယ်မှုများကိုစတင်ပြုလုပ်သည်၊ ၎င်းကကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတွင်ပြproblemsနာများနှင့်ပြissuesနာများ၏အဆိုးရွားဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖန်တီးပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံသောအခါ၊ ၎င်းကိုပြောင်းလဲရန်စွမ်းအားဖြစ်လာသည်။
ဒီလိုဖြစ်လင့်ကစားကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အခြေအနေအတွက်တာဝန်ယူရမယ်။ အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ရပ်တွေကြောင့်ပဲ၊ ဘယ်သူကမှငါတို့ကိုအတင်းအကျပ်ဖိအားမပေးခဲ့ဘူး။ ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦး ခေါင်းကိုသေနတ်မကိုင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်ခိုင်းတယ်။ ငါတို့ဘယ်သူ့ကိုမှဒီလိုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကတိပေးခဲ့တယ်။ ငါတို့အဲဒီလိုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ၊ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအဆင်ပြေတယ်၊ ​​အချိန်တန်ရင်အဆင်ပြေတယ်၊ ငါတို့မရပ်ချင်ဘူး၊ ဒါကစိတ်ဖိစီးမှုကိုသက်သာစေတယ်လို့ငါတို့ထင်ခဲ့လို့ပါ။ ငါတို့ရပ်တန့်မသွားနိူင်တဲ့အတွက်၊ ငါတို့ဟာစွဲလန်းလွန်းလို့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အထီးကျန်နေခြင်း၊ ငြီးငွေ့ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဤပြdoneနာကိုရင်ဆိုင်နေရသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းကဲ့သို့ထူးခြားသည့်အချက်များ၊ အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ သို့တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေကိုမည်သို့ပင်ပြုလုပ်ပါစေကျွန်ုပ်တို့၏ပြproblemနာတစ်ခုတည်းကိုသာကျွန်ုပ်တို့တာဝန်ယူသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေကိုလက်ခံပြီးသည့်နောက်သဘာဝကျသောခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ငါတို့ကလက်ခံတယ်၊
သို့သော်ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထင်မြင်ချက်ကိုသာပြုလုပ်နေကြဆဲဖြစ်သော်လည်း၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်ရမည်။ ဒီအချက်အလက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့မသုံးသပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရာရာဟာဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အရေးယူမှုသည်ဤအခက်အခဲများကိုကျော်လွှားရန်နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်၏ပုံမှန်အခြေအနေသို့အခြေချရန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ကိုရှောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ရမည်။
သင့်မှာထူးခြားတဲ့အခြားတစ်ယောက်ရှိရင်သူတို့ကိုပြောပြပါ။ သူတို့ကသူတို့ကအရမ်းရုပ်ဆိုးတယ်၊ အဆီအရမ်းများတယ်၊ သင့်အတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှောင်ထဲမှာမနေစေနဲ့။ လူအတော်များများကဒီပြproblemနာရှိနေတယ်ဆိုတာတောင်မှမသိကြဘူး၊ အဲဒါကသူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အများစုကပြthemနာကသူတို့နှင့်အတူရှိနေသည်၊ သူတို့အသွင်အပြင်၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပင်ဖြစ်သည်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရိုးသားပါ၊ သူတို့ထွက်ခွာရန်နှင့်သူတို့၏ထောက်ခံမှုကိုတောင်းခံရန်သင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောပြပါ။ အကယ်၍ သူတို့ကသင့်ကိုမထောက်ပံ့ချင်ဘူးဆိုရင်ဆက်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ်ကိုသိသိသာသာလျှော့ချရန်ကူညီလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသောလိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်များသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစဉ်းစားခြင်းဖြင့်ဆင်ခြေပေးခြင်း၊ လိမ်ခြင်း၊ porn နှင့်ဆက်စပ်သော ED ၏အဓိကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှာစိုးရိမ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော ED ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၌ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှုမြင်ပုံနှင့်၎င်းကိုကြည့်ရှုရန်အခြေအနေမည်သို့ရှိကြောင်းကိုလည်းပြန်ပြောပြသည်။ ပြtheနာကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖြေရှင်းသောအခါလျှို့ဝှက်ချက်များ၊ လိမ်လည်မှုများမရှိပါ၊ ၎င်းသည်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်တာဝန်ယူမှု၏နောက်ထပ်ရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်အမှန်တကယ်လက်ခံလျှင်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုပြောနိုင်သည်။ သင်သူတို့ကိုမပြောနိူင်လျှင်၎င်းကိုသင်အမှန်တကယ်သို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ပြproblemနာအဖြစ်အမှန်တကယ်လက်ခံခြင်းမရှိသေးသော်လည်းသင်မလုပ်မချင်းပြproblemနာဆက်ရှိနေ ဦး မည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်သေစာသောက်သုံးခြင်းဖြင့်လည်း၎င်းတို့ကိုသင်လုံးဝသုံးစွဲသည်ဟုယူဆပါ။ ဤအရာများထဲမှများများကသင့်အားသင်၏မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမူးယစ်စေစဉ်တွင် ပြန်၍ ဖြစ်ပေါ်စေရန်လုံလောက်သောသင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင်ဟာအရက်မူးလွန်းလို့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထိန်းချုပ်နိုင်လို့အရက်ပြန်သောက်တာထက်ပိုဆိုးတယ်လို့ခံစားရတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာ အဲဒါကိုမလုပ်ပါနဲ့ သငျသညျအားလုံးအတူတကွမူးယစ်ဆေးဝါးများမှရှောင်ရှားနိုင်လျှင်, ထိုစံပြပါပဲ။
နောက်ပိုင်းတွင်နီးပါးမလွှဲမရှောင်အမျိုးမျိုး၏သွေးဆောင်၏စိန်ခေါ်မှုရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဒါပေမယ့်ရုံ, အရေးယူနှင့်အတူအဆုံးသတ်ရန်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမ, ဒုတိယ, တတိယသို့မဟုတ်ပင်ဆယ်ဘို့တဘို့ကြိုးပမ်းမှုကျရှုံးပေလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ဒီလိုလုပ်ဖို့ဖြေရှင်းသင့်ကြောင်းရှိရာသို့အလျင်အမြန်ကြှနျုပျတို့သညျဤကျော်လျော့နည်းနာကျင်မှု get ကျနော်တို့တွေ့ကြုံခံစားရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ သို့သျောလညျးကြှနျတျောတို့အခွအေနေကျွန်တော်အမျိုးမျိုး၏သွေးဆောင်သို့ပေးခြင်းကိုယျ့ကိုယျကိုရှာဖွေတာစောင့်ရှောက်သောဤကဲ့သို့သောဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဤအသှေးဆောငျမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ ထိုအထဲကတချို့ဟာအတွေး, စကားလုံးနှင့်လုပ်ရပ်အတွက်အိမ်မထောင်ဘဲနေခြင်း၏အလေ့အကျင့်ဖြစ်သော Brahmacarya ၏အလေ့အကျင့်၌တွေ့နေကြပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာမှအလားအလာတစ်ဦးမောင်းနှင့်ကိုသရုပ်ဆောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောင်းနွမ်းလေ့လမ်းသို့ပြန်သွားကြသည်စေခြင်းငှါကြောင့်အိမ်မထောင်ဘဲနေခြင်း၏ဤအဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
ရိုးရှင်းစွာတစ်ဦးသွေးဆောင်မှုကိုခုခံတွန်းလှန်ရန်အလိုတော်ကင်းမဲ့ကိုတိုတောင်းအများဆုံးတှငျကြှနျုပျတို့ကကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက်အချို့သောနည်းလမ်းသို့မဟုတ် technique ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤ whack ထဲကထွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဇီဝဓါတုဗေဒ၏အစွမ်းထက်သက်ရောက်မှု၎င်း၏ရလဒ်လူ့ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် decider များမှာကျနော်တို့ထိန်းချုပ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကျနော်တို့ကပေါ်ပေါက်သည့်အခါသွေးဆောင်မှုကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်အရာများစွာကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ညစ်ညမ်း၏အရင်းအမြစ်ကိုဖယ်ရှားခြင်းဗြဲ။ ဒါကအိမ်မှာအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ရှိသည်ဖို့ငြင်းဆန်နှင့် smart ဖုန်းကိုရှိသည်ဖို့ငြင်းဆန်ဆိုလိုပေလိမ့်မည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းစဉ်တစ်လသို့မဟုတ်နှစ်ခုအဘို့နှင့်အတူအသက်ရှင်ဖို့အတော်လေးလွယ်ကူများမှာနှစ်ဦးစလုံး၏။
II ကို။ လမ်းလျှောက်တာကို။ တကယ်ပဲကိုယ့်ကိုတက်ရတဲ့နှင့်သင့်အခန်းထဲမှာထွက်ခွာနှင့်ပြင်ပတွင်သွားတဝိုက်လမ်းလျှောက်။ ပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်တွေအကြောင်း daydreaming, မိုဃ်းတိမ်တို့ကိုစောင့်ကြည့်, သဘောသဘာဝမှာလိုက်ရှာ။ သငျသညျအဆုံး ဖြတ်. ဤဖြစ်စဉ်ကိုတွေ့မြင်ရန်ပိုမိုအားကောင်းသန်နိဋ်ဌာနျဖနျတီးနိုငျကတည်းကဒီအဆုံးစွန်သောကယ့်ကိုကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ရုံကသင်လိုချင်သောအကြင်သူ၏အတူနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်လိုချင်သောအဖြစ်အဘို့, အဖြစ်အများကြီးသင်လိုချင်သောအဖြစ်, တဖနျလိင်ဆက်ဆံနိုင်စေဖို့ပါလိမ့်မည်ဘယ်လောက်ကြီးမြတ်စဉ်းစားပါ။ သင်ပြီးသားသူတို့ကိုနှစ်သက်သောအပေါငျးတို့သညျအခွားနညျးလမျးမြားအပွငျ၌သင်တို့ကိုလိင်ကိုချစ်လူအနှစ်သက်နိုင်ပါလိမ့်မည်ဘယ်လောက်ပျော်ရွှင်စဉ်းစားပါ။ ဤနည်းစဉ်းစားသင်အတိတ်နှင့်ပစ္စုပ္ပန်၏ထို့နောက်အနာဂတ်ထက်ဆိုးကျိုးများ၏လက္ခဏာပေါ်အာရုံစူးစိုက်စောင့်ရှောက်ကူညီပေးပါမည်။
၃ ။ အတူထိုင်။ သွေးဆောင်မှုများပေါ်ပေါက်လာပါကသင်၏အသိပညာကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ပါ။ သင့်ကိုယ်သင်စဉ်းစားပါ“ ဤတွင်သွေးဆောင်ခြင်း၏အတွေးများနှင့်ခံစားချက်များဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ဘယ်နေရာမှထွက်လာပြီးကျွန်ုပ်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၌တကယ့်အစွမ်းတန်ခိုးမရှိပါ။ သူတို့ကိုငါမခေါ်ပါ၊ သူတို့ကိုမခေါ်ခဲ့ဘူး၊ သူတို့ကိုမလိုချင်ဘူး၊ အကယ်၍ မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ပြီးပါကအတွေးသည်သဲလွန်စမရှိဘဲပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်အစပျိုးခြင်းများကို ဆက်၍ နှိပ်လျှင်သို့မဟုတ်သွေးဆောင်မှုသည်အထူးသဖြင့်ပြင်းထန်လျှင်၊ ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်။ သို့သော်အတွေးနှင့်ခံစားချက်များနှင့်အတူထိုင်ခြင်းအကျင့်သည်ဇွဲရှိခြင်းနှင့်ဆိုင်သည်။ သူတို့ကိုဤနည်းဖြင့်ဆက်ကြည့်နေရုံသာဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ယင်း၏ပူးတွဲဖိုင်များမပါဘဲနှင့်၎င်းကိုမထိန်းနိုင်ဘဲဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။
IV ။ အေးတင်ပါးဆုံရိုးရေချိုး။ သင့်ရဲ့တင်ပါးထက်မပိုမြင့်နစ်မြုပ်အေးမြသောရေတိမ်ပိုင်းရေကူးကန်ထဲမှာထိုင်နေ။ ဤသည်အခြေခံအားဖြင့်တစ်ဦးထက်ပိုသောငြိမ်သက်ပြည်နယ်သို့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ကို shocking နီးပါးချက်ချင်းအလိုဆန္ဒ၏အကြီးမြတ်သဘောတူညီချက်သတ်လိမ့်မည်။
V. အခြားအလုပ်အကိုင်။ ဗီဒီယိုဂိမ်း Play, ပန်းချီတက်ယူ, လေးကိုရိုက်ကူးမာရသွန်လုပ်နေစတင်ထွက်အလုပ်လုပ်, သင်အမြဲရေးသားဖို့စေချင်ကြောင်းဝတ္ထုကိုစတင်လေ့လာပါ။ ဤနေရာတွင်အဆုံးမဲ့ options များ။
ဒီသိသာထင်ရှားတဲ့အများကြီးလူတိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ၎င်း၏ငါ porn နှင့်ဆက်စပ်သော ED ဖြစ်ပေါ်လာသောအဘယ်အရာကိုကျော်ရနိုင်ရန်အတွက် PMO ရပ်တန့်သူဖြစ်ကြောင်းကိုသောငါ၏ရှုထောင့်ကနေတိကျမ်းစာ၌လာသည်။ သူတို့ရဲ့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်သမျှအဘို့အ nofap လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြသောအခါသို့သော်များစွာသောလူတူသောအရာတို့ကိုခံစားရသည်။ တစ်ခုမှာကျရှုံးအဖြစ်မည်သူမဆိုတခြားလုပ်နိုင်တဲ့သလောက်အရှက်ကွဲခြင်းနဲ့အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားမိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရွံမုန်းတဲ့ထံမှဘဲ ပတ်သက်. အကြံဉာဏ်ကိုနေတုန်းပဲသက်ဆိုင်ပါသည်။ ရုံသင်သည်တတ်နိုင်အကောင်းဆုံးကိုမဖြတ်ဖို့ဖြေရှင်းစောင့်ရှောက်လော့။
tl: dr - ညစ်ညမ်းသော ED ကိုကျော်လွှားရန်အဆင့်ခြောက်ဆင့်ရှိသည်။
(၁) ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေသည်မမြဲသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြောင်းလဲနိုင်သောစွမ်းရည်ရှိကြောင်းကိုလက်ခံခြင်း။ ၂ ။ ၎င်းသည်သဘာဝနိယာမများနှင့်အညီဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုလက်ခံခြင်းနှင့်သဘာဝ (ဇီဝဓာတုဗေဒနှင့်စိတ် - ခန္ဓာကိုယ်အေးစက်ခြင်း) သည်ထိုပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်မဟုတ်ပါ။ ၃ ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေကိုဖန်တီးရာတွင်ပြင်ပအခြေအနေများပါ ၀ င်သောအခန်းကဏ္ကိုလက်ခံခြင်း။ IV ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာ ၀ န်ယူမှု။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ပြproblemနာကိုအခြားသူများအပေါ်မပြခြင်းနှင့်၎င်းအတွက်အခြားသူများကိုအပြစ်မတင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ပြေးခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောအခြားသူများအားကျွန်ုပ်တို့မပြုလုပ်နိူင်သည့်အကြောင်းလိမ်ပြောခြင်းကိုမဆိုလိုသည်။ ငါတို့ပိုင်ဆိုင်သည်ငါတို့ပိုင်ဆိုင်သည်။ V. ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိခဲ့သောဗဟုသုတအသစ်များကိုတတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ခြင်း။ ၆ ။ မျှတသောလိင်ဆိုင်ရာဖော်ပြမှုသို့ပြန်သွားရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးပမ်းရာတွင်အောင်မြင်မှုရရှိစေရန်မည်သည့်နည်းစနစ်ကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်း။